के छ ड्राई आँखा, सबैलाई थाह छ। तथापि, सबैलाई यो अप्रिय घटना को छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी थाह छ। यो अन्त गर्न हामी तपाईँलाई नेत्र रोग विशेषज्ञ सम्पर्क सुझाव। आखिर, मात्र एक संकीर्ण विशेषज्ञ लागि भनेर moisturize सबै भन्दा राम्रो दबाइ चयन र वातावरण को नकारात्मक प्रभाव देखि कर्निया रक्षा गर्न सक्षम हुनेछ।
सबैभन्दा लोकप्रिय औषधि को एक हटाउन आँखाको जलन एक दबाइ "Oftolik" छ। समीक्षा, दबाइ को मूल्य तल प्रस्तुत गरिनेछ। तपाईं पनि उहाँले कुनै पनि contraindications र analogues छ भने कसरी यो दबाइ प्रयोग गर्न सिक्न हुनेछ।
प्याकेजिङ्ग, संरचना र फारम
के रूप मा दबाइ निर्मित छ "Oftolik"? समीक्षा यस उपकरण को रूप मा पाउन सकिन्छ भन्ने रिपोर्ट आँखा घटेको। तिनीहरूले यस्तो पोलीविनायल रक्सी र povidone रूपमा सक्रिय यौगिकों समावेश गर्नुहोस्। पनि छलफल निरूपण इंजेक्शन लागि disodium edetate, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हीड्राकसीड र पानी रूपमा adjunct सामाग्री comprises।
आँखा गर्न लागूऔषधको बिक्री vials-droppers मा आउँछ। तिनीहरूले जो प्रयोगको लागि विस्तृत निर्देशनहरू समावेश एक गत्ता बक्स, मा राखिनेछ।
स्थानीय दबाइ "Oftolik" आँखा (समीक्षा, मूल्य तल सूचित), एक keratoprotektor छ खस्छ। यसलाई थप चिस्यान दृश्य अंगहरु लागि प्रयोग गरिन्छ।
को secretion को कम स्तर अन्तर्गत टियर तरल पदार्थ दबाइ को कर्निया रक्षा गर्न मद्दत गर्छ। एउटै प्रभाव र टियर फिलिम को वृद्धि वाष्पीकरण संग एक थोपा छ।
को दवादारू "Oftolik" मा निहित गुण के-के हुन्? समीक्षा रोगी यो एजेन्ट को प्रयोग आँखाको जलन र राता कम सुझाव। यो एक दवादारू povidone र पोलीविनायल रक्सी को उपस्थिति द्वारा सुनिश्चित छ। तिनीहरूले दृश्य अङ्गहरूको hydration योगदान छ कि एक स्नेहक, रूपमा कार्य।
आँखा को सतह मा रही, सक्रिय सामाग्री थोपाहरूद्वारा को टियर फिलिम को विरूपण सम्भावित घटना रोकन, यसको envelop भोल्टेज कम र ध्यानपूर्वक।
conjunctival ग्रन्थीहरूको उत्पादित पोलीविनायल रक्सी mucin समान यसको pharmacological गुण द्वारा। आँखा सक्रिय घटक को श्लेम लाग्एको झिल्ली संग सम्पर्क पछि lachrymal फिलिम राज्य stabilizes, र पनि lubricates र दृश्य अंगहरु को सतह moistens।
यो systemic परिसंचरण दबाइ "Oftolik" मा अवशोषित हुन्छ? समीक्षा विशेषज्ञहरु यस तैयारी को परीक्षा समयमा आँखा को सतह संग आफ्नो सम्पर्क दुई प्लाज्मा सक्रिय सामाग्री को4chasa एकाग्रता मार्फत खस्छ भनेर निकै कम छ प्रकट भन्छन्। यो एउटा सानो क्रमबद्घ अवशोषण घटेको सुझाव।
केही अवस्थामा, रोगी खस्छ "Oftolik" तोकिएको गर्न सकिन्छ? चिकित्सकहरु को समीक्षा यस चिकित्सा सुक्खा आँखा प्रकुपित सबै अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ भनेर संकेत गर्छ। विशेष मा, दबाइ मा नियुक्त हुन सक्छन्:
नियमित र गंभीर जलन र बेचैनी;
जब प्रयोग कृत्रिम आँसु, lacrimal तरल पदार्थ को secretion मा एक कमी द्वारा ट्रिगर थियो;
सुक्खा आँखा सिंड्रोम।
यस सन्तुलित सूत्र बावजुद, समीक्षा जो, सकारात्मक भन्दा बढी हो निम्न contraindications छ, "Oftolik" खस्छ:
दबाइ पदार्थ को एक अतिसंवेदनशीलता;
एलर्जी प्रतिक्रिया को उपस्थिति।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो दबाइ प्रयोग एलर्जी लक्षण (जस्तै, बेचैनी, गंभीर बल्न, राता, आँखा र अत्यधिक tearing मा बालुवा भएको अनुभूति) को पहिलो प्रकटीकरण मा बन्द गर्नुपर्छ।
आँखा "Oftolik" को लागि तयारी: बयान
डाक्टर को समीक्षा यस उपकरण मात्र संकेत गर्दा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छन्। प्रभावकारी गीला दृश्य अंगहरु, साथै सुरक्षा लागि दबाइ कर्निया एकांतर प्रत्येक आँखा 1-2 थोपा मा डाले।
सबै भन्दा राम्रो परिणाम लागि, प्रक्रिया पछि, तपाईंले आफ्नो आँखा, को खतरा स्थिति लिएर बन्द र केही मिनेट आराम गर्नुपर्छ। यो दवादारू समान भिजुअल अंगहरु को सतह भन्दा वितरण गरिएको छ अनुमति दिन्छ।
आँखा खस्छ "Oftolik" धेरै शायद साइड इफेक्ट कारण। तिनीहरूले एलर्जी लक्षण मात्र प्रकुपित गर्न सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, दबाइ पल्टाइदिनुभयो।
अधिमात्रा को अवस्थामा
हालसम्म, दबाइ अधिमात्रा को अवस्थामा "Oftolik" निश्चित भएको छैन। तथापि, विशेषज्ञहरु रोगी को आँखा को बारम्बार र प्रशस्त instillation एक एलर्जी प्रतिक्रिया को लक्षण देखाउन सक्छ भन्ने विश्वास गर्छन्।
अन्य लागूपदार्थको संग अन्तरक्रिया
निर्देशनहरू अनुसार, पोलीविनायल रक्सी बलियो एसिड को प्रभाव अन्तर्गत नष्ट गर्न सकिन्छ। को alkalis र कमजोर एसिड, यो घटक मात्र नरम छ।
उच्च खुराक मा, पोलीविनायल रक्सी लवण, अकार्बनिक मूल भइरहेको Phosphates, र sulfates सहित नमिल्ने। जब एक precipitate पहिलो सम्भव गठन अन्तरक्रिया।
को povidone लागि, यो पनि अकार्बनिक लवण अमिल्दो छ। यसबाहेक, पदार्थ प्राकृतिक र कृत्रिम रेजिन संग प्रतिक्रिया।
मूल्य र analogues
दबाइ "Oftolik" द्वारा प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ? अतिथि विशेषज्ञहरु भन्न समान कार्यसँग औषधि हो: "Artelak", "हिलो-छाती", "भिजेको-छाती", "Sikapos", "Vidisik", "Oftalmosol", "Hypromellose", "Optive", "Oftagel "" आँखा थोपा "।
दबाइ को मूल्य 170-220 rubles छ।
आँखा दृष्टि को अंगहरु को सामान्य कामकाज पुनर्स्थापना गर्न मदत, "Oftolik" सकारात्मक आँखा को सतह मा प्रभाव खस्छ। यो राय विरामीहरु को बहुमत द्वारा साझेदारी गरिएको छ छ यो दबाइ प्रयोग गर्न कहिल्यै।
प्रतिक्रियाको उपभोक्ताहरु प्रभाव अनुसार थोपाहरूद्वारा लागू लगभग तुरुन्त हुन्छ पछि। तिनीहरूले र चाँडै छन् सुक्खा आँखा लक्षण र मदत overvoltage राहत। साथै, दबाइ धेरै प्रभावकारी छ कम्प्युटर मा एक लामो बसाइ द्वारा ट्रिगर थिए जो जलन र राता, हटाउँदै गर्दा नै प्रकट।
"Atsidum सी": निर्देशन। कसरी पिउने रोक्न "Atsidum सी"
Mouthwash "Listerine": एक प्रतिक्रिया निर्देश पुस्तिका
पुदीना। विभिन्न क्षेत्रहरू आवेदन
"कानाल" (सिरप): प्रयोगका लागि निर्देशन, प्रतिक्रिया
कसरी चलचित्र देखि एक वर्ण आकर्षित गर्न? सरल सिफारिसहरू
कसरी तितली बनाइएको छ
कर रिटर्न पेश गर्न असफल भएको के हो?
एक सैद्धान्तिक दृष्टिकोण रूपमा दर्शन मुख्य कार्यहरु
महासागर नीलो समुद्र बालुवा5* (Punta Cana, डोमिनिकन गणतन्त्र): कोठा, सेवा, को विवरण
"ब्रासलाल लेक" एक राष्ट्रिय पार्क हो। "ब्रास्लाल लेक": मनोरञ्जन केन्द्रहरू, एक सेनेटरीमा, माछा पकडने। तस्वीरहरू र समीक्षाहरू
यस परिदृश्य डिजाइन सुख्खा क्रीक। देश सुख्खा क्रीक: योजना
सुर्रे मा नर्सरी - आफ्नो पाल्तु जनावर सुरक्षित